Mibitsika ny kanton’i Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
"Tsy hita amin'ny ankamaroan'ny habaka sosialy, [...] ireo Desi mpanakanto"
Voadika ny 31 Oktobra 2019 19:26 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, русский, ਪੰਜਾਬੀ, Español, Română , English
Vao haingana, nanempotra ny Twitter ny tenifototra iray, #SouthAsianArtists (Mpanakanton'iAziaAtsimo). Taona fahatelo misesy izao hanoloran'ireo mpanakanto ao Afghanistana, Bangladesh, Bhoutan, India, Maldiva, Nepal, Pakistana sy Sri Lanka ny asany ao ambanin'ity tenifototra ity ao anatin'ny ezaka iray hanaovan-javatra momba ny tsy fahampian'ny solotena Aziatika any amin'ireo habaka famoronana an-tambajotra.
(Avereno Bitsihana mba hanaparitahana ilay hafatra!) Miverina indray ny #SouthAsianArtists amin'ity faran'ny herinandro 12-13 Okt ity! Tsotra ireo fitsipika: resaho kely ny mombamomba anao miaraka amin'ny asanao! Raisinay am-pifaliana ireo mpanakanto eo an-toerana sy ny am-pielezana!! Mba zarazarao azafady mba hampitana ilay hafatra ✨✨✨ pic.twitter.com/ZuGl0MP84Z
Salama, mpanakanto Bengali izay tia manao sary hosodoko vehivavy Bengali aho. Nibadabada tany anaty taratasy sora-tanana ihany koa aho ary tao anatin'ny sorakaliana Arabo mihitsy aza#SouthAsianArtists pt4 pic.twitter.com/9OqNicy4Y3
Telo taona lasa izay, nanomboka ny tenifototra #DrawingWhileBlack ny mpanao sary iray nonina tany Los Angeles, Annabelle Hayford, mba hanasongadinana sy hankalazana ireo rehetra mainty hoditra mpanakanto manerana ny tany. Nampitsiry fahatongavan-tsaina tato amiko izany fa any amin'ny ankamaroan'ireo tambajotra sosialy sy sehatra natokana hiresahana ny kanto, tsy hita ireo mpanakanto Desi. Tena nanahirana ahy be ny tsy fahampian'ny fahitàna an'i Azia Atsimo teny anivon'ireo habaka famoronana an-tambajotra. Izany no antony namoronako ny #SouthAsianArtists niaraka tamin'ny Annabelle mba hankalazana sy hanasongadinana ireo mpanakanto Aziatika Atsimo eo anoloan'ny mponina manerana ny tany. Hetsika an-tambajotra izany satria manampy amin'ny fandrodanana ireo fetra sy mampifandray haingana ny olona rehetra manerana ny tany ny Aterineto. Nifandray araka izay maha-metimety azy, ny fahafahana sy endrik'ilay hetsika tao an-tambajotra ireo manan-talenta maro eny an-toerana sy ny any am-pielezana.
Salama oh, Umair no anarako. Pakistaney mpanao sary sy mpanetsika sary. Miasa amin'ny tantara an-tsary ahitàna ireo maherifo eto an-toerana aho ankehitriny! #SouthAsianArtists pic.twitter.com/MyH25epxgw
Ary koa, ity tenifototra ity no tsara indrindra mba hahitàna kanto mahafinaritra!#SouthAsianArtists pic.twitter.com/M2aA8Hyu2J
Salama, Sariko no anarako! Amerikana-Indiana mpanakanto amin'ny fampivoarana ara-tsary aho. Mamorona sary ho an'ny fandaharana PBS Kids/Amazon aho. Amin'ny fotoana fialàko sasatra, manao sary maherifo sy mpandihy balerina aho. #SouthAsianArtists pic.twitter.com/ANmrsy7mwz
Salama ‘nareo, Esha/Mai no anarako, 16 taona, avy aty Bangladesh aho !! Tia manao sarin'olona aho, indrindra vehivavy tsara tarehy!! Matetika manao kanto nentim-paharazana amin'ny pensily hazo aho fa indraindray mibadabada amin'ny niomerika!! #SouthAsianArtists pic.twitter.com/JoUBrE1o4P
Tsy dia manana fahafahana maro ireo vehivavy mpanakanto mba hanolorana ny asany. Traikefa mahagaga ny fahitàna vehivavy Desi maro manan-talenta mampiasa ilay tenifototra mba hanasongadinany ny tenany. Kasaiko ny handrakitra tsara izany asa izany amin'ny hoavy no sady koa hampidititra ireo mpanakanto nasongadina tao amin'ny #SouthAsianArtists ao anatina tetikasa feno hery famoronana bebe kokoa.